श्रावण १२ गते, २०७३ बुधवार
27th July, 2016 Wed १२:२६:१० मा प्रकाशित
यो अन्तर्वार्ता द टाइम्स अफ इण्डियाका लागि केशव प्रधानले लिएका हुन् । २७ जुलार्इमा प्रकाशित यो वार्ता खबरडबली सहकर्मी जानुका पराजुलीले भावानुवाद गरेकी हुन् –सम्पादक ।
नेपालमा सरकार गिराउने खेल पुन सुरु भएको छ , यसले नेपालको अस्थिरतालाई झनै बढाउने काम गरेको छ , अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
नेपालको राजनीतिमा निकै उतार चढाबहरु हुँदै आएका छन् । अहिले हामी नयाँ सरकार निर्माण गर्ने नयाँ राजनीतिक प्रक्रियामा छौ । हामी सबैका लागि स्विकार्य हुने गरि सबै कुरालाई तार्किक निश्कर्ष दिन चाहन्छौ ।
तपाई प्रधानमन्त्री भएपछिको सवैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यहरु के के हुन ?
सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा भनेको त संविधानको कार्यन्वयनको कुरा नै हो । त्यसका लागि संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका मधेसी , थारु , आदिबासी जनजाती सवैलाई समेट्ने परिवेश सिर्जना गर्न जरुरी छ । साथै भूकम्प पछिको पुन निर्माणको कामलाई तिव्रता दिनुका साथै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो फड्को मार्ने गरि आर्थिक विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता प्रदान गर्नु नै मेरो मुख्य काम हो ।
केपी ओलीको बर्हिगमन र तपाईको प्रधानमन्त्रीमा आगमनलाई भारतीय लगायत अरुले पनि बेइजिङमाथि दिल्ली हाबी भएको बताइरहेका छन् नी ?
यस्तो हल्का खालको विष्लेषणले कुनै पक्षलाई पनि फाइदा गर्दैन । परिस्थिति र यसको गंभिरतालाई नबुझिकन गरिएको विष्लेषण हो यो । यो कसैको हार र जितको सवाल होइन ।
केपी ओली स्वयले पनि सरकार गिराउन भारतको हात छ भनिरहेका छन् नी ?
यो नितान्त गलत कुरा हो । उहाँले जे अभिव्यक्ति गरिरहनु भएको छ यसले सवैका लागि समस्या सृजना गरिरहेको छ । यसले उहाँ स्वयंलाई पनि फाइदा पुरइरहेको छैन ।
तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुमा कोही बाहिरी पक्षको हात छ ?
कसैको हात छैन ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा गत २०६३ सालको दलहरुबीचकोे १२ बुँदे सहमतिमा दिल्लीको भूमिकालाई स्विकार्नु हुन्छ ?
नेपालको राजनीतिमा यहाँका जनताको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो । शान्तिप्रक्रियाका लागि दलहरुको बीचमा भएको १२ बृुँदे समझदारीमा भारतको भुमिका मनन योग्य छ ।
तपार्इँको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राखेर अघि बढन् सक्छ ?
नेपाल र नेपाली जनता नै हाम्रा लागि सर्वोपरि हो । यहाँभन्दा बाहिर हामी कोही पनि जान सक्दैनौ । हामी नेपालीहरुको हितलाई केन्द्रमा राखेर चीन र भारत दुवै मुलुकसँग सौहार्द सम्बन्ध राख्छौ । द टाइम्स अफ इण्डियाको यो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्